Encyclopedia yeKaturike Kutenda
Yakavanzika Policy & Cookies
Mhinduro yakanakisa: Chii chinonzi kutendeuka zvinoenderana neChechi yeKaturike?
Category: Nezve chitendero 0
Chii chinonzi kutendeuka kwauri? Shanduko izwi rinobva muchiLatin conversio iro rinoreva chiito nemhedzisiro yekushandura kana kushandura ...
Ndeapi maitiro akajairika ezvitendero zvemumwechete?
Ndeapi maitiro akajairika ezvitendero zvemumwechete? Zvinhu zvakasarudzika. Monotheism, seyakajairwa chitendero, inozivikanwa nekuve: Kusabatanidza mamwe machechi, kubvira ...
Jesu akabvunzei Mwari mumunyengetero?
Sei uchifanira kunamata muzita raJesu? Ishe Jesu Kristu vanotidzidzisa kunamata, uye tinobvumirana kuti mhinduro dzichagashirwa. “Naizvozvo, gara ...
Ndechipi chitendero chevaTaantantuyo?
Chitendero chaive sei muTahuantinsuyo? Chitendero chaitaurwa nevaInca chaive chekunamata vanamwari vakawanda, ndiko kuti, vanamwari vakati wandei vainamatwa mumhemberero dzaitsigirwa ...
Mhinduro yakanakisa: Ndeupi Mutumwa mukuru wezivo?
Ndeupi mutumwa mukuru wanhasi Muvhuro? Zuva rekuremekedzwa mutumwa mukuru Jofiel Muvhuro, ndosaka iri nguva yakanaka yekukumikidza ...
Ko Johane Mubapatidzi akatumira Jesu kunobvunza chii?
Johane Mubhabhatidzi anokumbira Jesu kuti abvunzei? Johane Mubapatidzi akavatuma kuna Jesu nemubvunzo wakakosha wekuti anga ...
Chii chinonzi dzimba dzemachechi eRussia dzinonzi?
Russia ine machechi mangani? Patriarch Kiril akawedzerawo kuti Chechi inodzora matembere makumi matatu nemazana mapfumbamwe nemazana mapfumbamwe panonamatirwa, mamonari mazana mana nemakumi mana nemaviri emamongi nemamonastery mazana mana nemakumi mana nemaviri e ...
Ndeupi murairo unonyanya kukosha wakapihwa Mosesi naMwari?
Ndeupi mutemo unonyanya kukosha? Jesu akapindura achiti: Ida Ishe, Mwari wako, nemoyo wako wose, nemweya wako wose uye nefungwa dzako dzose….
Ndeipi nzira yakanakisa yekunzwisisa Bhaibheri?
Unotanga sei kuverenga Bhaibheri? 10 Mazano ekudzidza Bhaibheri Tanga kudzidza kwako nekukumbira rubatsiro rwaMwari. Izvo hazvina basa kuti utange kuverenga kubva ...
Ruka ndiani mubhuku raJesu?
Chii chinonzi Ruka munhoroondo Jesu? Cast Actor / Actress Character Cássio Pandolph Melchor Tatsu Carvalho Gaspar Cridemar Aquino Baltasar Jonatas Faro Lucas el Evangelista Unozvizivisa sei ku…
1 2 ... 6,039 Next
Mhoroi apo! Ini ndinonzi Alberto. Pane yangu blog, ini ndinogovana zvinonakidza zvinyorwa zvedzidziso yeKaturike, dzidziso dzekutenda, uye masakaramende.
Mubvunzo: Munamato waIshe unonyorwa sei muChirungu?
Mubvunzo: Chii chinonzi rubhabhatidzo rwemvura kuvaKristu?
Chii chinonzi kugadzirwa kwevanhu uye kwechitendero?
Rute anotaurwa nezvake muBhaibheri?
Chii chinonzi munamato wemafuta matsvene?
Inowanzo Bvunzwa Mubvunzo: Ndeapi marudzi emakomputa ari mumutsara?
Makore mangani akararama Johane Mupositori?
© 2021 Synod
KUTARISIRA VABATI VAKARURAMA! Zvese zvinhu zvinoiswa pane saiti zvakanyatsoitirwa ruzivo uye zvedzidzo zvinangwa! Kana iwe uchidavira kuti kutumira chero chinhu kunotyora kodzero yako, iva nechokwadi chekutibata nesu kuburikidza nefomu rekubatana uye zvinhu zvako zvichabviswa.